Madaxweynaha K/Galbeed ‘Laftagareen’ oo dib ugu noqday Baydhabo & Doorasho ka billaabaneysa… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha K/Galbeed ‘Laftagareen’ oo dib ugu noqday Baydhabo & Doorasho ka billaabaneysa…
Madaxweynaha K/Galbeed ‘Laftagareen’ oo dib ugu noqday Baydhabo & Doorasho ka billaabaneysa…
Baydhabo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa Talaadadii maanta dib ugu laabtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Madaxweyne Laftagareen ayaa maalmahaan Muqdisho ka waday kulamo lagu dhex-dhexaadinayo Madaxda Dowladda, Midowga Musharraxiinta iyo Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland oo isku khilafsan arrimaha doorashooyinka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Maamulka Koonfur Galbeed uu noqon doono Maamulka ugu horreeya ee bilaaba doorashada Xubnaha Aqalka sare ee deeganada Maamulkaasi.
Sidoo kale, warar kale ayaa sheegaya in Madaxweyne Laftagareen uu qaatay doorka dhex-dhexaadinta Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul Goboleedyada ee isku haya arrimaha doorashooyinka.
Caqabadda ugu horeysa ee heysta doorashada Soomaaliya ayaa ah arrinta Gobolka Gedo iyo in laga heshiiyo Guddiga doorashooyinka ee Xukuumadda ay magacowday.
Doorashada Aqalka sare oo bilaabaneysa